Chikumi 2, 2018 arun
Visa Outage muna Europe Inokurudzira Anotarisirwa pamusoro Cryptocurrency zvemba
Payment zvemichina akagovera vatengi yose rurefu azvipire kurerukirwa. Kana ano ichi zvikasashanda sezvo kuzoona, ari kuitika achava matambudziko chaizvo. Visa vakatambura achidzima kakawanda zvikuru Europe yose kwemakore akawanda zuva iri Friday. Izvi kunosimbisa kudiwa dzimwe mhinduro, kusanganisira mari uye kunyange cryptocurrency.
Visa kukundikana mu Europe
Vatengi nemabhizimisi muEurope aiva chikuru mubhadharo matambudziko neChishanu. Munhu kuedza kuti kwema achishandisa Visa muripo kadhi angave aiva nezvinetso. Kwema vaiva shoma kana hazviiti kupedza. Financial Masangano kunyange vakayambira vatengi kushandisa mari kana zvimwe nzira mubhadharo. Mastercard haana kukanganiswa nyaya iyi.
Visa haana kukurumidza akataura kuti paIndaneti kwema vakatambura zvishoma panyaya iyi. Point-of-sero kwema vakasara “rova ndokurasikirwa” kwemakore akawanda zuva. Kushandisa contactless kadhi kuti kwema duku raiva noitika kakawanda. izvi zvose zvinoratidza sei nyore mari ichaita kuti michina matambudziko.
Events vakaita izvi kazhinji kukonzera asingafanoonekwi yakaipa. Various ATMs muUK akanga ashandisa dzavo mari reserves masikati. Nepo dambudziko kwakagadziriswa, mukuru mukuru mashoko haana kupiwa. The zvivanakire muripo makadhi chete chinoshanda kana zvakaoma kwezvivako runotibatsira kubhadhara izvi zvinoshanda zvakanaka. For Visa, zvakanga kure nyaya zuro.
Kudiwa cryptocurrency uye mari
vatengi Most vachine mari iripo kubata nemamiriro ezvinhu akadaro. Nepo kukundikana yakadaro mashoma chaizvo, vanogona kuitika chero nguva. Saka hatitarisiri kuti mari kuparadzwa nokusingaperi kuderedzwa zvachose. Kutonga ichi wokupedzisira naka, kuti zvimwe akanakisisa.
Pamusoro pe, ari vhiza nyaya inoratidza kuti nzira nzira muripo zvinodiwawo. Kusiyana Mari makadhi mari, cryptocurrencies anogona kuponesa zuva munguva yakaita izvi. Pasinei volatility yavo, vazhinji mubhadharo processors zviripo kubata cryptocurrency kwema zvisinei kwekanguva mutengo nokufamba.
Vatengi nemabhizimisi vanofanira kuteerera inotsiva izvi. Ndiyo nzira yakanaka kuchengeta yaivakwanira mari iri paruoko, asi ichiri zvinoda akakodzera kubhadhara kadhi mubve imwe ATM. Cryptocurrencies vari nezvechisarudzo, kunyange nhasi vari kugamuchirwa chete retailers shoma. matambudziko akadaro aigona kuchinja nokukurumidza pane Papera.
Kraken Daily Market Mushumo 02.06.2018
$131M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Huobi crypto Exchange anoronga Brazil kuwedzera
Huobi, chikuru cryptocurrency Exchange anobva China, ari akamumutsira chitoro kuBrazil.
A mumiririri kubva Huobi Group dzakatsigira chekambani chinangwa kupinda pamusika Brazilian.
The kuedza inoratidza rimwe danho Huobi vakaronga kuwedzera munyika yose.
kunyange zvazvo Bitcoin, Uye ...
Next Post:Ethereum Wallet ImToken ane $ 35B mu deposits, kupfuurisa 99% US mabhanga